कार्ल मार्क्सले भनेझै जब गरिब र निमुखा जनताको रगत र पशिना चुसेर नेतृत्व गर्नेहरू पहुँचको आधारमा पुजिवाद तिर लम्मकिएर पुजी सञ्चय गरि निम्न र उच्च भन्ने दुरी तयार गर्छन्छन । तब निम्न वर्गबाट वर्ग सङ्घर्ष सुरू हुन्छ । हो त्यहि संघर्ष को परिणाम हो रतन तिरुवाले प्रचण्ड लाई जुत्ता प्रहार गरेको ।
रतन ले त्यस्ता लाखौ निमुखा जनता को प्रतिनिधित्व गरेका छन जस्ले जन युद्धमा आफ्ना अभिभावक गुमाएका छन र त्यस्तो पीडा झेली रहेका छ्न जहाँ अभाव सग पैठेजोडी खेलिरहेका छ्न । निमुखाको सपना माथि कुठाराघात गर्ने , र रतन को बुवा जस्ता हजारौं सहिद को योगदान लाई सत्ताको भर्र्याङ् बनाउने प्रचण्ड ले बर्ग संघर्ष कुरा गर्न सुहाउछ ?
रतन ले त्यस्तो परिवारको प्रतिनिधित्व गर्छ्न जब त्यो प्रहार गरेको जुत्ता किन्न पैसा उनले गाउँमा ‘आमा’ लाई ऋण खाेज्न लगाउनु पर्छ । अनि उनको अगाडी प्रचण्डले वर्ग सङ्घर्ष सफल भो भन्ने ?
हिजो जनयुद्धले प्रचण्डहरू जन्मायो । प्रचण्डले रतनहरू जन्माए। रतनहरू अब ब्यक्ति होईन, बिचार हो । आन्दोलन हो । हिजो जनयुद्धमा बाउ गुमाउनेले आज त्यही जनयुद्धको सुप्रिम कमान्डर लाइ जुत्ता हानेको हो । केही त सोच्नुस् न कमरेडहरु ।
बिचार, आदर्शहरु स्खलित भए पछि हिजो पदम को झपड देखि जुत्ता सम्म को परिस्थिति कसरी आयो ? आज २/४ जना नेता र उनी हरु का झोले हरु को जीवन शैली मा परिवर्तन आउदै मा हिजो का जन युद्धमा योगदान पुर्याएका र आम जनताको जीवन शैली मा आमूल परिवर्तन आएको छैन कम्रेड।
कयौं घाइते हरु उपचार नपाएर अझै छट्पटाइ रहेका छन , बेपत्ता को कुनै पत्ता छैन, कयौ लडाकु डिप्रेसन को सिकार मा छन , कयौ योद्धा खाडिमा छन । क्रान्तिलाई लथालिङ्ग पारेर सत्ताको स्वाद मा डुबेर आफुलाइ श्रीपेच बिहिन राजा जस्तै राजसी सुख सयल मा सयर गरेर क्रान्ति पूरा भयो र बर्ग संघर्ष पूरा भयो भन्दा कुन निमुखा को कन्पारो तातिदैन ?
उनी माथी जुत्ता प्रहार भएको जनताको आक्रोश हो , प्रचण्ड को नियत र नैतिकता माथी को प्रहार हो ।
जब रतन ले आफ्नो आक्रोश प्रचण्ड माथि पोखे त्यो आक्रोस एउटा रतन को होइन हजारौ सहिद को सपूतहरुको हो । एउटा बुवाआमा गुमाउनु को पीडा त्यो गुमाउने लाई मात्र थाह छ । त्यो बियोग को पीडा उनले सहना सकेन र प्रहार गरे ।
उता जुम्लाको नेकपा ले एउटा विज्ञप्ति निकालेर झन निर्लजता देखाएको छ । र भनेको छ कुनै सहिद परिवार को छोरा होइन ।
हिजो जनयुद्धमा त्यस्ता हजारौं मान्छे को नाम छुटेको छ जो जन युद्धमा सहभागी थिए , त्यस्ता हजारौको नाम समेटिएको छ जो कुनै जन युद्धमा सहभागी थिएनन् । त्यस्ता आकडा हेरेर सहिद को तुलना नगरौ। के सहिद परिवार हुन नेकपा को झोले नै हुनु पर्छ ? जुत्ता कान्ड् पछि सामाजिक संजाल मा हजारौ प्रतिक्रिया आए ।
अरिङ्गालहरुले यति सम्म लेखे कि रतन आतंककारी नै हुन भनेर घोषण गरे । वाह तिम्रो राजनीतिक सस्कार आफ्ना महाराज हरु ले अर्बौं अर्ब को घोटाला, कयौ काण्ड मचाउदा चुप लाग्ने एउटा निमुखा माथि खनिने तिम्रो अरिङ्गाल पारा लास्टै घाटिया र दुई कौडी को छ ।
तिमीहरुकै भाषामा भन्नु पर्दा जब रतन तिरुवाले प्रचण्डमाथि जुत्ता प्रहार गरेलगत्तै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा “मोवाईल” प्रहार गर्ने ट्रेड युनियनका भोला पोखरेल र “लातले हान्ने” प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटा के आतंककारी हुन ? र अर्को कुरा उनी हरुलाइ प्रहरीले हिरासतमा नलिनु पर्ने कारण के हो ? कानुन के सानो र निमुखा लाइ मात्रै छ ? नेताका झोलेहरु लाई छैन ?
जुत्ता हान्ने होस् या पछाडि बाट लात हान्ने होस् दुबै रमैला मानिस रहेछन । जुत्ता हान्नेलाइ रिहाई होस र लात हान्नेलाइ जेल चलान होस । तर यसो कदापी हुदैन किन कि डाडु पन्यु उनै कै हात मा छन ।
आफ्नो कमान्डर माथी जुत्ता परेको कारण रतनलाई हदै सम्म को सजाय माग गर्ने तोर्पेहरुलाइ के अबगत गराउन चाहन्छु भने अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुश माथि पनि जुत्ता प्रहार भएको थियो, शक्तिमा रहेका राजनीतिज्ञ माथि यी कुरा सामान्य हुन् । सम्झ ल ।
पसिना बेचेर जिन्दगी चलाऊ केही फरक पर्दैन ! तर इमान र अस्तित्व बेचेर महल नबनाउ । त्यसैको उपहार हो जुत्ता। नेता जि पदमको झापड देखि रतनको जुत्ता प्रहार सम्म त स्वभाविक हो सायद अब आउनेले खुडा अनि भाला हान्छन होला यस्तै राजनितिक अवस्था रहेमा ।
जुत्ता प्रहार लाइ कठोर दण्ड दिनुपर्ने खालको अपराधकोरुपमा अतिरञ्जितपनि नगरौं। नेताहरू स‍ोचुन। तर उ पक्राउ परेपछि दुईजना सत्ताका उन्मादिले जुन व्यवहार देखाए त्योै हदैसम्मको घृणित र दण्डनिय कृत्य हो ।
प्रचण्ड जि यदि बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ भने जुत्ता हान्ने लाई कारबाही हैन घरमा गएर सोध्नुस् समस्या के हो ? जनयुद्धमा बाबु गुमाएका रतन र उनको पुस्ताले प्रचण्डको काटमारको राजनीतिबाट के पाए? केवल श्रीपेचविनाका राजाहरु कि अरु पनि? घटनाको पिँधसम्म यस्तै ठूला प्रश्नहरु छन्।
लेखक सल्यानको कुमाख गाउँपालिका ५ कालागाउँका हुन्
प्रकाशित मिति २०७६ फागुन १९ गते